Iingcaphuno ezivela kwi- 'Metamorphosis' nguFranz Kafka
I-Metamorphosis ngumculo owaziwayo nguFranz Kafka . Umsebenzi uphawula umthengisi ohambahambayo, uGregor Samsa ovusa ngolunye usuku kusasa ukuba uyaguquke. Ibali le-absurdist libhekwa njengengxenye ye-Dada yobugcisa bokunyakaza.
"Xa uGregor Samsa evuka ekuseni kusasa ekuphumeni kwamaphupha, wafumana uguqukile ebhedeni yakhe ibe yintlanzi enkulu. Wayeselele emhlane wakhe kunzima njengeplani yeenqwelo, kwaye xa ephakamisa intloko yakhe encinane, wabona i-brown esiswini, esinezimbambo ezinemilo, enobumba obunqamlekileyo, malunga nokutshitshisa ngokupheleleyo, akunakunamathela.
Imilenze yakhe emininzi, inomfesane ngokucatshulwa ngokuthelekiswa nobukhulu bayo bonke, yayingenakunceda phambi kwamehlo akhe. "
- I-Metamorphosis , i-Ch. 1
"Kutheni nje uGregor wagwetyelwa ukuba asebenze kwenkampani apho ayenokukukhanyela khona ngokukhawuleza?" Ngaba bonke abasebenzi babengabikho ngaphandle, bekungekho mntu unyanisekileyo, ozinikeleyo phakathi kwabo, xa engazange asebenzise ngokupheleleyo iiyure ezimbalwa zokusa kwenkampani, yaqhutyelwa yintlanzi yintliziyo yesazela kwaye yayingakwazi ukuphuma ebhedeni? "
"Kwaye ngoku wayembona, ehleli kufuphi nomnyango, isandla sakhe sagxininisa umlomo wakhe ovulekileyo, ngokunyanzela ukuxhaswa njengokungathi uyanyanyiswa ngumntu ongabonakaliyo, ongenamandla. Unina - nangona ubukho bomphathi wayemi kunye neenwele zakhe ukungaxhasi ebusuku, ukugxotha kuyo yonke indawo-kuqala wabheka uyise ngokubethelwa izandla, wathatha amanyathelo amabini ukuya kuGregor, waza wangena phakathi kwengubo yakhe ejikelezayo, ebusweni bakhe.
Ngentetho enenzondelelo, uyise wayifaka isibalo sakhe, njengokungathi uqhube uGoror wabuyela ekamelweni lakhe, wajonga ngokungaqiniseki ngekamelo lokuhlala, wakhusela amehlo akhe ngezandla zakhe, waza wambiza iintloko zesifuba sakhe esinamandla. "
"Ezo zihlandlo ezimnandi, kwaye bebengakaze babuye, ubuncinane bengekho uzuko olufanayo, nangona kamva uGregor wathola imali eyaneleyo yokudibana neendleko zentsapho yonke kwaye wenza njalo.
Babesanda kulusebenzisa, intsapho kunye noGregor, imali yamukelwa ngokubulela kwaye inikwe ngokuzonwabisa. "
- I-Metamorphosis , i-Ch. 2
"Kwakungekho wangena egumbini kunokuba agijime ngqo ewindow ngaphandle kokuthatha ixesha lokuvala umnyango - nangona wayedla ngokunyamekela ukuba wonke umntu abone igumbi likaGregor - uze udibanise ukuvula izikhalazo ngezandla ezithandayo, malunga nokuba bekuncipha, kwaye bahlala ixesha elincinane kwifestile nakwimozulu ebanda kakhulu, ukuphefumula ngokujulile. Ngaloo mjaho kunye nokuqhaqhazela, wayethusa uGregor kabini ngosuku; ngokuqinisekileyo wayemncedisa oku ukuba wayekufumene ukuba akwazi ukuma egumbini kunye naye efestile. "
"Egumbini apho uGregor wayelawula khona iindonga ezingenanto, kungekho mntu uhlala eceleni kweGrte wayeza kubeka unyawo."
"Inxeba enkulu kaGregor, apho wahlupheka khona ngaphezu kwenyanga - i-apula yahlala isinyakanyiswe enyameni njengembulelo ebonakalayo ekubeni akukho mntu wayenqabileyo ukususa yona-yabonakala ekhumbuze nokuba uyise ukuba uGregor wayelungu losapho, nxamnye nesimo sakhe esinobuhlungu nesixhalabisayo, esingazange sithathwe njengotshaba; ukuba ngokuchaseneyo, kwakuwumyalelo wokunyaniseka kwentsapho kunye nokunyamezela, ukunyamezela kuye kwaye akukho nto. "
- I-Metamorphosis , i-Ch.
"Yiyiphi ihlabathi elifunayo abantu abahluphekileyo abakwenzayo ngokusemandleni abo; uyise wazisa isidlo sakusasa kumagosa amancinci ebhankini, unina wazinikela esibingelelweni samagumbi angaphantsi, udade wakhe wagijima emva nangemva kwe-counter isicelo sabantu abathengi; kodwa nantoni na ngaphezu kwalokhu babengenamandla. "
- I-Metamorphosis , i-Ch. 3
"Andiyi kubiza igama lomntakwabo phambi kwesi silo, kwaye ngoko konke ndithethayo: kufuneka sizame ukuyilahla. Senze konke okusemandleni ukuba sikhathalele kwaye sibeke kunye naloo nto; andicinga ukuba nabani na ongasimangalela. "
- I-Metamorphosis , i-Ch. 3, iphe. 51
"Ukukhula kancinci kunye nokuthetha ngokungazi kakuhle ngeengqungquthela, bacinga ukuba kungekudala kungekudala, ukufumana umyeni omhle.
Kwaye kwakunjengokuqinisekiswa kwamaphupha abo amatsha kunye neenjongo ezilungileyo xa ekupheleni kokukhwelisa intombi yabo yavuka kuqala kwaye yolulela umzimba wayo omncinane. "
Iingcaphuno ezivela kuMtyholi kunye noTom Walker
Izulu neHayire kwiNgqungquthela yamaHindu yokuqala
Iimifanekiso eziPhambili zeMfazwe ezili-10 zeMinyaka